FANAMBANIANA MPANAO GAZETY : Mangataka fialan-tsiny ampahibemaso ny Holafitra
Fihetsika feno fanafitohinana, vava tsy ambina, ireo no nataon’ny ramatoa solombavambahoaka voafidy tany Isandra, Rabetafika Norovelo Robertine tamin’ireo mpanao gazety marobe tonga nanatanteraka ny asany teny amin’ny lapan’ny antenimieram-pirenena afak’omaly. 15 mars 2018
Fanevatevana miendrika fanambaniana tsotr’izao no nahazo ireo mpampahalala vaovao tamin’izany izay nilazany fa « maimbo helika ny mpanao gazety » saingy tamin’ny fomba an-kolaka no noentiny nitenenany izany. Io teny io izay nanaitra ny rehetra tao anatin’ny efitrano fivoriana, eny fa hatramin’ireo depiote namany aza dia nahatsiaro ho tafintohina tanteraka tamin’io vava navoakany io.
Manoloana iny zava-nitranga iny indrindra dia namoaka fanambaràna ny teo anivon’ny Holafitry ny mpanao gazety, omaly. Mangataka izy ireo ny hanaovan’ireo mpikambana eo anivon’ny antenimieram-pirenena fialan-tsiny imasom-bahoaka satria fanalam-baraka, fanambaniana sady fanevatevana tanteraka ny hasin’ny mpanao gazety io vava navoakan’ny ramatoa solombavambahoaka io.
« Ny mpanao gazety izay tonga teny amin’ny lapam-panjakana Tsimbazaza dia tsy tafiditra tao anatin’ny efitra fivoriana raha tsy nisy nampandroso fa tsy sanatria akory nanao amboletra ka niditra ity lapam-panjakana ity. Hanatanteraka ny asa nampiandraiketina azy ny mpanao gazety ary izay indrindra ihany koa no anton-dian’izy ireo teny amin’ny antenimieram-pirenena Tsimbazaza.
Tsy ekena ny fanohintohinana ny mpanao gazety manao ny asany na amin’ny endrika inona na amin’ny endrika inona. Araka izany mangataka ny hanatanterahana fialan-tsiny ampahibemaso ataon’ny eo anivon’ny antenimieram-pirenena manoloana ny teny feno fanambaniana natao tamin’ny mpanao gazety ny holafitra », hoy ny voarakitra tao anatin’ilay fanambaràna.
Hita tao anatin’ny tambajotran-tserasera « facebook » tamin’ny alalan’ny kaontin’ity depiote ity fa niezaka hatrany nanadio ny tenany izy ary nilaza fa « fitarainana fotsiny ihany no nataony noho ny hafanana tao anatin’ny efitrano, ary tsy nanonona anarana velively ny tenany ». Tsy nisy afa-tsy ireo mpanao gazety manatanteraka ny asany anefa no nanodidina azy ary avy hatrany dia tafita ny hafatra tiany hambara na dia niezahany natao tamin’ny fomba an-kolaka aza. Andrasana ny tohin’ity raharaha ity na hanaiky hanao izay fialan-tsiny izay ity mpikambana eo anivon’ny antenimieram-pirenena ity na tsia.